နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home News Breaking News နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: မေ 10, 2018 In: Breaking News, Chairperson, NewsNo Comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ – အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသရှိ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တို့ကို ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ဧည့်သည်တော် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Shri Vikram Misri လည်း တက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ပွညျပရေးရာဝနျကွီး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော မေ ၁ဝ
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့သညျ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ပွညျပရေးရာဝနျကွီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ အား ယနညေ့နေ ၄ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော သံတမနျဆောငျ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ – အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေး၊ ရခိုငျပွညျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ နှဈနိုငျငံ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုနျသှယျမှုကဏ်ဍ တိုးမွှငျ့ရေး၊ နှဈနိုငျငံ နယျစပျဒသေရှိ ပွညျသူမြား၏ လူမှုစီးပှားဘဝ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေး၊ ဒသေတှငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ ဆကျလကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေး တို့ကို ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့အတူ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျး၊ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွပွီး ဧညျ့သညျတျော အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ပွညျပရေးရာဝနျကွီး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Shri Vikram Misri လညျး တကျရောကျသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး HE. Smt. Sushma Swaraj အား လက်ခံတွေ့ဆုံ